केटीएम ड्युक २०० किन्ने कि २५० ? अपग्रेडयुक्त बीएस ६ मोडल रोजाईमा ग्राहक – Hamrosandesh.com
केटीएम ड्युक २०० किन्ने कि २५० ? अपग्रेडयुक्त बीएस ६ मोडल रोजाईमा ग्राहक
केटीएम २०० ड्युक पुरै परिमार्जित रुपमा नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ । नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले बीएस ६ मापदण्डयुक्त २०२० मोडलको केटीएम २०० ड्युक नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको हो ।
२०२० केटीएम २०० ड्युकलाई पूरै तवरले अपग्रेड गरिएको छ, जुन शानदार १२९० सुपर ड्यूक—आर बाट प्रेरित छ । यस बाइकको एकदमै नयाँ अनि ज्यादै हलुका स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, ट्याङ्क र हेडल्याम्पका साथ अपग्रेड गरिएको छ तथा यसको पूरै बनावटलाई नयाँ रुप दिइएको छ ।
यो बाइक ड्युअल–च्यानल एबीएस र एलईडी डीआरएल जस्तो एकदम नयाँ सुविधाहरुले भरिपूर्ण छ । यी नयाँ सुविधाहरुको साथै यस बाइकमा अल्ट्रा कम्प्याक्ट, लिक्विड–कूल्ड, डीओएचसी ४–भल्भ इन्जिन, अत्याधुनिक इन्जेक्सन इलेक्ट्रोनिक्स, उन्नत डब्ल्युपी सस्पेन्सन तथा आकर्षक देखिने स्वींगआर्म जस्तै उच्च प्राविधिक क्षमता भएको कम्पनेन्ट छ, जसले बाइक चलाउने बेला ज्यादै आनन्द तथा तीव्र गतिले मोडिने क्षमता प्रदान गर्छ ।
यसमा अर्को प्रमुख सुधार भनेको इन्धन ट्यांककीको क्षमतालाई १०.२ लिटरबाट बढाएर १३.५ लिटर गरिएको छ । जसबाट चालकले ३० प्रतिशत अतिरिक्त दूरीसम्मको आनन्द लिन सक्छन् ।
केटीएम २०० ड्युक यस श्रेणीमा सबैभन्दा ज्यादा अर्थात् २५ पीएसको पावरले भरिपूर्ण छ तथा आउटगोइङ्ग मोडलको रुपमा १९.३ एनएम टर्क उत्पन्न गर्न सक्छ ।
ड्युअल च्यानल एबीएसको साथ बिल्कुलै नयाँ केटीएम २०० ड्युक २ नयाँ रङको विकल्पः इलेक्ट्रोनिक अरेन्ज र सिरेमिक व्हाइटमा उपलब्ध हुनेछ
सो बाइकको मूल्य ५ लाख ३९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नेपाली बजारमा केटीएम २५० ड्युक पनि बीएस ६ इन्जिनका साथ उपलब्ध भएको छ । यसमा भएको ओपन–कार्टिज, अपसाइड–डाउन डब्ल्युपी फोर्क, स्लीपर क्लच र प्री–लोड एड्जस्टेबल मोनोसक जस्ता दमदार एवं शानदार विशेषताहरुले भरिपूर्ण यो बाइक धेरै तीव्र एवं फुर्तिलो छ । यसले ३० पीएसको दामदार पावरको साथ २४ एनएम टर्क उत्पन्न गर्दछ ।
नयाँ २०२० केटीएम २५० ड्युकको स्ट्याण्डर्ड बाइक सुपरमोटोका साथ ड्युअल च्यानल एबीएसले सुसज्जित छ । यो मोडल २ नयाँ रङ – सिल्भर मेटालिक र डार्क ग्याल्भानोको साथ उपलब्ध छ ।
यसको मूल्य ६ लाख ३९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।